राजधानी बाहिरका विद्यार्थीको कालोबजारी अनुभव : माया रोकाया - Rajmarga
टिप्पणी : कोरोनाले यतिबेला विश्वलाइनै आक्रान्त पारी रहेको छ । यसबेला यहाँ मान्छेहरु गाउँ देखि सहर सम्म कालो बजारी गरीरहेका छन् ।
यस्तो बिषम परिस्थितीमा कसरी कालो बजारी गर्न रुचाउँछन् होला ? केवल आफ्नो लागि मात्र सोच्नुले नै आज देशमा अथवा विश्वमा व्याप्त कालो बजारी सिर्जना भएको छ ।
आफ्नाका नीमीत ससानाकुराहरु लुकाउनु अथवा स्टक राखीदिनु , यहाँ धनी वा पूजींपति वर्गले पुरै डिपाटमेन्टल स्टोर नै आफ्नो बनाउनु अनि गरीबवर्ग खास गरी हामी राजधानी बाहिरका विद्यार्थी जो सङ एक हप्ताका निम्ति सामानहरु स्टक राख्न पैसा हुदैन यसले नै जनाउछ कि संसारमा मानवता कति सम्म जिवित छ भनेर ।
मास्क लिन मेडीकल वा अन्य पसल गयो मास्क हुदैन , भन्छन् भर्खरै सकियो । आफन्त ,आसे पासेका निम्ति स्टक राख्दै र बढी मूल्यमा बेच्नका नीमीत्त व्यापारीहरुले नीच मानसिकता बनाएका हुन्छन् ।त्यस्तै ग्यास डिपोमा पनि ग्यास मिल्दैन् । त्यहाँको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।आफ्ना लागि र आफ्ना आफन्तहरुका नीमीत्त लुकाएर राख्नमा नै व्यापारी व्यस्त छन ।
यहाँ पहुँच नहुने वालाहरु गरीबवर्गहरु जो सङ मजदुरी गरेर जीवीका धानी रहेका छन् उनीहरूअलीकती मास्क पनि पाउदैनन् र ग्यास कीन्न जादा ग्यास पाउदैनन् । यस्तो अवस्था छ । यसमा सम्बन्धित नीकाय अथवा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन्। यस्तो लाग्छ यि व्यापारीहरु कसरी सक्छन् होला झुठो बोलेर अमानवीय व्यवहार देखाउन ?
अर्को तिर देशका राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले भने अनेक ठाउमा भीड बनाएर मास्क लगायत अन्य सामाग्रीहरु बाडि रहेका हुनेछन्, आखिर कहाँ बाट आउदछ होला उनिहरुलाई ?
आज मान्छे यस संकटको घडीमा पनि वाही वाही पाउनका निमीत्त पनि आज कालो बजारीको बाटो अपनाइ रहेकोे छ । हामी , तपाई भीत्रको मानवताले पाउने हो वाही वाही कृपया वाही वाही पाउनका नीमीत्त गलत कार्य नगरौ र यदी कहिँ कतै भैरहेको छ भने जीम्मेवार नागरिकको हैसियतले खबरदारी गरौं ।
सरकारले बनाएको नीति नीयमको पालना गरौं घरमै बसौं । तपाईं एक जनाले नै धेरै गलत कुरा हुनबाट रोक्न सक्नुहुन्छ । किनभने तपाईं अथवा म घरबाट बाहीरीएको खण्डमा के था तपाई हामी जाने भीडमा कोही कतै केरोनाको सिकार भैरहेको छ कि ?
यदि उक्त व्यक्तिका नजिक गै तपाईं घर फर्किनु भयो भने तपाईको परीवार तहसनहस हुनसक्छ ।तपाई सङ जोडीने आफन्तहरुको जीवन तहसनहस हुनसक्छ त्यसैले कृपया सबै जना आफू बाचौ र अरुलाइ पनि बचाउ । कालो बजारीका बीरुद्ध सबैले आआफ्नो ठाउँबाट खबदारी गरौँ ।
Previous Previous post: औषधि र चिकित्सक लिएर नेपालगञ्ज पुगेको विमान दुर्घटना
Next Next post: कोरोना सतर्कता, सन्त्रास र मनोविज्ञान:डा. टीकाराम पोखरेल
विश्वकप फुटबलमा आज यस्तो छ प्रतियोगिता, कुन १६ प्रवेश गर्दै कुन बाहिरिँदै ?
स्याङ्बोचे टिपर दुर्घटना: मृतकको संख्या १९ पुग्यो
महोतरीको पाटुदेखी बर्दिबाससम्म सडक असुरक्षित बन्दै, महिलाहरु बजार जान डराउछन
विमान चालक नै मापसेमा परेपछि…